Home News MW Farmaajo oo u magacaabay abtigiis Xoghaya Joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha...
MW Farmaajo oo u magacaabay abtigiis Xoghaya Joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda. Kheyre muxuu oran doonaa?
Warqad maanta ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda Arrimaha Dibadda Axmed Ciise Cawad ayaa xilka looga qaaday Xoghayihii Joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Cali Maxamed Cali oo loo yaqaan (Cali Bin Cali), waxaana isla wareegtadaas xilka Xoghayaha Joogtada ah loogu magacaabay Saciid Xaaji Maxamuud.
Xoghaya cusub ee la magacaabay ayaA ah Madaxweyne Farmaajo Abtigiis labaad waxana ay ilmo adeer koowaad yihiin Madaxweynaha Hooyadii
Xil ka qaadistan ayaa ka hor imaaneysa amar uu soo saaray RW Kheyre 16 May ee sanadkan 2018 taasoo uu ku amray in wasiirada xukuumaddiisa aanay xil ka qaadis ku sameyn karin agaasimayaasha wasaaradaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya (Halkan ka akhriso amarkii RW Kheyre).
Waxaa isa soo taraya kala fogaanshaha RW Kheyre iyo Madaxweyne Farmaajo waxaana laga dareemaya ficilada cusub iyo dhiiranaanta uu la soo baxay Madaxweyne Farmaajo. RW ayaa zaaka xilkii ka qaaday R/Waasaraha Wasiirkii Wabarashada.
Waxaa isi soo taraya ku tagri falka awoodda dowliga ah iyo eexda qaraabeysiga ee Madaxweyne Farmaajo. Waxaa gebi ahaanba laga ceyriyay xarunta Villa Soomaaliya shaqaale kor u dhaafay 200 oo intooda badani ay ka soo jeedaan beelweynta Hawiye, waxana lagu bedelay shaqaale kale oo ka soo jeeda beesha Daarood ee uu ka dhashay Madaxweyna Farmaajo.
Waxaa sii kordhaya amni xumada ka jirta Magaalada Muqdisho waxaana la ugaarsanayaa dhammaan shaqaalaha dowladda iyo ciidanka noocyadiisa kala duwan, waxaana maanta oo keliya lagu dilay magaalada Muqdisho ilaa toddoba qof oo isugu jira shacab, shaqaale dowlad iyo ciidan.
Previous articleR/wasaare Kheeyre oo Laba Arin Garoowe u tagaya iyo C/wali gaas oo kasii Baraan-degaaya!!
Next articleKacdoon ka dhan R/wasaare Kheeyre oo ka Bilaawday Magaalada Baladweyne Iyo shacabka oo kacay’’Kheeyrlaawe Dooni Meeyno’’
Wararkii Ugu Danbeeyay Doorashada Gudonka Golaha Shacabka iyo Is Diiwan Galinta...